Dos Rios Rod kunye Gun ClubHunting, Ukuloba, Birding
Ukuloba okumangalisayo, ukuzingela kunye nokubukela iintaka ezintle. Indawo yethu ineembono ezintle ngalo lonke ixesha losuku; ukusuka ilanga ukuya kutsho ekutshoneni kwelanga awuyi kuphoswa! Uya kuyithanda le propathi intle ngaphandle izele zizilwanyana ezininzi ezintle onokuzibona okanye uzingelwe. Kukho isandla esenziwe ngepalapa esine-BBQ enkulu thina (okanye wena) sinokupheka into oyibambileyo! Le ndawo intle ngaphakathi nangaphandle kweloji. Indawo yethu ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), kunye namaqela amakhulu.
Ngaba ujonge ukubaleka kancinci kwimihla ngemihla? Ngaba lixesha lokuba uthathe ikhefu olifuna kakhulu? Ewe, ukukhangela kwakho kuphelile. I-Dos Rios Rod kunye neKlabhu yoMpu yindawo yokuzingela kunye nokuloba i-Birding lodge esebenza njengendawo efanelekileyo yokuloba ushishino kunye nokuzingela kwemveli. Tsalela umnxeba uDos Rios Rod kunye neGun Club namhlanje ukuze ufunde ngakumbi malunga neepakethi zethu ezininzi zokuzingela.
Ukuzola okumnandi kujikelezwe ngezandi zendalo; kukhatshwa kukuphuma nokutshona kwelanga okuhle
E-Dos Rios Rod kunye ne-Gun Club, sinikezela ngeepakethi ezininzi kunye nezinto ezisebenzayo ukusuka ekuboneni, ukubukela iintaka, ukuzingela zonke iintlobo zezilwanyana ezijikeleze indawo yethu. Sinesandla sefama esifumanekayo sokunceda kwaye uphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo ukuba ujonga incwadi yeendwendwe uya kubona zonke izilwanyana zasendle esinazo. Ukuba unomdla kwiintlobo ezingaqhelekanga kakhulu siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba sikufumanele zona. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna nje UKUBHEKISA NGOKU nceda ufowunele.
E-Dos Rios Rod kunye ne-Gun Club, sinikezela ngeepakethi ezininzi kunye nezinto ezisebenzayo ukusuka ekuboneni, ukubukela iintaka, ukuzingela zonke iintlobo zezilwanyana ezijikelez…